Kungenzeka yini ukuthi singena onyakeni ofudumele? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Kunezinhlobo eziningi ezahlukahlukene zamalogi okushisa ahlukahlukene. Yize zonke zikhomba ngokufanayo, amadigri wesifunda angaba kusuka ezindaweni ezincane kuya ezifundeni ezinkulu, noma kusuka ezikhathini ezimfushane kuya ezinde kakhulu (isilinganiso samazinga okushisa). Lo nyaka uphinde ukhombe omunye wemfudumalo emhlabeni, futhi kungenzeka kube unyaka ofudumele kunayo yonke owake waba khona eSpain.
Kepha kukhona okwenzekayo kulo nyaka okungakaze kwenzeke phambilini, futhi yingxenye eshaqisa kunazo zonke yokushisa kwamazinga okushisa emhlabeni jikelele. Isimo se-El Niño akukaze kwenzeke. Phakathi neminyaka ka-El Niño, lapho ulwandle lukhipha ukushisa okwengeziwe emkhathini, kuvame ukuba yiminyaka efudumele kakhulu. Njengoba kunikezwe ukuthi u-2017 awenzekanga, mancane amathuba okuthi amazinga okushisa omhlaba abe ngaphezu kwesilinganiso sango-2016 ngokwesilinganiso kodwa ahluke kakhulu ngo-0 ºC.
Amazinga Okushisa Okumaphakathi Komhlaba Wonke (ishadi elihlinzekwe yi-NOAA)
Ngezinyanga eziyi-8 zokuqala zonyaka I-2017, inyanga ngayinye ibingaphakathi kwezinyanga ezi-4 ezifudumele kakhulu selokhu kwenziwa amarekhodi. Lokhu kuholele ekutheni u-2017 abe nezinga lokushisa eliphakeme lesibili elirekhodiwe eminyakeni eyi-138. Ngalesi sikhathi, ngaphandle kwento ka-El Niño, iyawenza, futhi ngokude, unyaka ofudumele kunazo zonke emlandweni ngaphandle kwalesi simo. Yini eyayizokwenzeka ukube u-El Niño naye wayenzekile? Kungenzeka, irekhodi lokushisa lomhlaba omusha ngabe lisethiwe.
Njengoba sikwazi ukubona kugrafu, sinokushisa komhlaba wonke, kweNyakatho neNingizimu Nenkabazwe. Owenza umehluko omkhulu yiNyakatho Nenkabazwe.Uma sibheka amazinga okushisa aphakathi nendawo abhalisiwe kusukela ngonyaka ka-2000, siyabona ukuthi kukhona ukubuyela emuva okubukeka sengathi kuyanda futhi akunikezeli. Ngaphezu kwalokho, ukushesha kwamazinga okushisa eminyakeni yamuva akubuyisi futhi kuyakhathaza. Futhi ukubheka lokho Bekungunyaka onamagagasi amaningi okushisa eSpain Kusukela ngo-1975, kulo nyaka izwe lase-Iberia libheke kokungahle kube yimfudumalo kakhulu njengoba kunamarekhodi.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Kungenzeka yini ukuthi singena onyakeni ofudumele?
Ngicabanga ukuthi enye yezinkinga ezikhona manje ukuthi umuntu ukhohlwe ukuthi uhlala emhlabeni onamandla futhi ongaguquguquki nokuthi ngokwemvelo futhi ngokuhamba kwesikhathi izinguquko zesimo sezulu ziyenzeka ezivumela izidalwa eziphilayo zeplanethi ukuthi zivumelane kancane kancane nalezi zinguquko Kodwa-ke, inkinga ukuthi lapho lezi zinguquko zibucayi ngezenzo ezingafanele ekuphatheni ibhalansi yemvelo, zibangela ukuncishiswa noma ukunyamalala okucacile kwalezi zinhlobo nezinsiza zemvelo. Ngakho-ke ngokwemininingwane esiyifunda kule ndatshana singena enkambisweni yemvelo yokushisa komhlaba, kungenzeka-ke ukuthi singena esikhathini sokuguquka kwalolu shintsho lwemvelo.
I-Orionid meteor shower, enye yezinto ezinhle kakhulu onyakeni